सेक्ससँग सम्बन्धित यस्ता बानीले वैवाहिक जीवनलाई बनाउँछ खुसियाली | Rajmarga
सेक्ससँग सम्बन्धित यस्ता बानीले वैवाहिक जीवनलाई बनाउँछ खुसियाली
यसमा कुनै शंका छैन कि सबैको वैवाहिक जीवन निकै एक्साइटिङ हुँदैन। केही मानिसको वैवाहिक जीवन यति रमाइलो हुन्छ कि मानिसहरु उनीहरुको इर्श्या गर्न लाक्दछन्।जबकि कतिपय जोडी जीवनमा प्रेम र खुसीको खोजिमा हुन्छन् ।
यदि तपाई सोचिरहनु भएको छ कि त्यो कुन कुरा हो जसमा जोडीहरु आफ्नो लभ लाइफलाई सधैं सानदार बनाइराख्न सक्छन् । तपाईलाई यहाँ सेक्ससँग सम्बन्धित केही बानी उल्लेख गरिरहेका छौ जसबाट तपाईको पनि वैवाहिक जीवन सधैं खुसियालीपूर्ण र रोमाञ्चक हुनेछ ।
नयाँ प्रयोग गर्नुस्
यदि तपाई बोरियत र निरसतालाई आफ्नो बेडरुमबाट टाढा राख्न चाहनु हुन्छ भने तपाईले नयाँ कुराको प्रयोग गर्नबाट नहिच्किचाउनुस् । चाहे त्यो यौन आसनमा पनि नयाँ प्रयोग गर्नुस वा ट्रेडिङ्ग टोयज प्रयोग गर्नुस्…धेरैजसो जोडी आफ्नो वैवाहिक जीवनमा मात्र यही कारणबाट निरसताको सामना गर्दछन् किनभने उनीहरु नयाँ प्रयोग गर्न चाहँदैनन्।
सेक्सका लागि टाइम निकाल्नुस्
यदि दुवै जना काममा हुनुहुन्छ भने एकअर्काका लागि समय निकाल्न निकै कठिन हुन्छ, यसमा कुनै शंका छैन । कार्यालयमा दिनभरको थकानपछि कसैसँग पनि त्यति ऊर्जा बच्दैन कि पार्टनरसँग प्रेमिल कुरा गर्न सकियोस् । ।यद्यपि यस्तो विवाहित जोडी जसको यौन जीवन निकै एक्साइटिङ हुन्छ, उनीहरु सधैं एकअर्काका लागि र सेक्सका लागि समय लिकाली हाल्छन् । चाहे उनीहरु जतिसुकै थाकेका किन नहुन् ।
पार्टनरलाई दिनुस् सरप्राइज
यस्ता निकै कम मानिस हुन्छन्, जसलाई सरप्राइज मन पर्दैन । कतिपय अवस्थामा निकै नै वैवाहिक मात्र यसकारणबाट कमजोर पर्दछ कि पार्टनर र उनीहरुको बानी निकै निरस भइसकेको हुन्छ । यस्तोमा सरप्राइजले तपाईको सम्बन्ध बचाउन सक्दछ । यो सरप्राइज जे पनि हुन सक्छ । अनप्लान्ड विकेन्ड ट्रिप, डिनर डेट वा कुनै मायालु उपहार । यसप्रकारका ससाना सरप्राइजको माध्यमबाट पार्टनर यो सोच्न बाध्य हुन्छ कि अब बेडमा अर्को के सरप्राइज प्राप्त हुनेवाला छ।
पार्टनरको आवश्यकता बुझ्नुस्
रमाइलो वैवाहिक जीवन बिताउने अधिकांश जोडी एकअर्काको रुची अरुचीका बारेमा राम्रोसँग बुझ्दछन् । यदि श्रीमानलाई एक्सपेरिमन्टल सेक्समा रुची छ भने श्रीमतीको यस्तो कोशिस रहन्छ कि उनी श्रीमानको फैन्टसी पूरा गरुन्। यदि श्रीमतीलाई फोरप्लेमा रुची छ भने श्रीमानले पनि यो कुरा ध्यान दिनु जरुरी छ कि सेक्सभन्दा पहिला श्रीमतीलाई सन्तुष्ट गर्न सकियोस् । स्वस्थ सम्बन्धका लागि यो जरुरी छ कि दुवै पार्टनरलाई सन्तुष्ट पार्न सकुन् । एजेन्सी
Previous post: मच्छड किन खतरनाक छ ? मच्छडको सफाया गर्दा मानिसलाई कस्तो होला हानी ? यस्तो छ विश्लेषण
Next post: नेपाल भ्रमणमा आफ्नै कार ल्याउँदैछन् मोदीले